साहसी सोनाम | मझेरी डट कम
kbs — Fri, 05/01/2009 - 19:51
त्यही घरको ढोका उघार्दै दस-एघार वर्ष जतिको दुब्लो पातलो सोनाम खुसीले चिच्चायो - 'बा ए बा ... ।' बोल्दाबोल्दै सोनाम रोक्कियो ।
काठको खटियामा सुतिरहेको कनैयाले सोनामतिर हेर्दै भने, 'मलाई थाहा छ, तँ छ कक्षाको परीक्षामा पनि पहिला नै भइस् होइन त ?'
सोनामले बाबु नजिकै गई निधार छाम्दै भन्यो- 'ला ...! तिमीलाई त ज्वरो पो आएछ । ओठ पनि सुकेको छ, पानी खान्छौ ?'
कनैयाले उत्तर दिए- 'भैगो मेरो पीर नगर् । बरु भन् तँ प्रथम भइस् होइन ?'
'हो बा, म प्रथम नै भएँ । म धेरै पढ्छु । धेरै पैसा कमाउँछु अनि तिमीलाई सुख दिन्छु ।'
कनैयाले हर्षको आँसु झार्दै भने- 'तेरी आमा बिरामी पर्दा त्यसै भन्थी । म नरहे पनि सोनामले तिमीलाई सुख दिन्छ । तँलाई भोक पनि लाग्यो होला घरमा खानेकुरा केही पनि छैन । झवेन्द्रको होटेलमा गई पैसा माग् । त्यो पैसाले तँलाई खाजा र मलाई ज्वरोको औषधि लेराइज ।'
बाबुको कुरा सुनेर सोनाम सरासर झवेन्द्रको होटलमा गयो । मोटो शरीर, ठूलो भुँडी र गोलो अनुहार भएको झवेन्द्र ग्राहकहरूसँग पैसा लिँदै थियो । सोनामलाई देख्नेबित्तिकै हकार्दै भन्यो- 'ए फुच्चे, खै माछा ल्याएको ? तेरो बाबु कता हरायो ?'
सोनामले डराउँदै भन्यो- 'बाबु बिरामी छन् । बाबुले पैसा माग्न ...... ।'
सोनामको कुरा टुङ्िगन नपाउँदै झवेन्द्र झोक्कियो - 'छैन पैसासैसा, यहाँबाट खुरुक्क भाग् । तेरो बाबुले सधैं झैं माछा लिएर आउँछ भनी पर्खेर बसेको त .....। बिहानै भन्न सक्दैन थिइस् ? म अरूसँँग माछा लिई हाल्थेँ नि । अबदेखि तेरो बाबुसँग म ठेक्कामा माछा लिन्न ।'
छिमेकी विमलाले भनिन््, 'सोनाम, यो पानीमा नाङ्गै-बुङ्गै हातमा जाल लिएर कहाँ गएर आउँदै छस् ?'
सोनामको कुरा सुनेर खुसी हुँदै विमलाले भनिन्- 'हुने बिरुवाको चिल्लो पात' भनेको यही हो, ल ले म नै तेरो माछा किनिदिन्छु ।'
सोनामले खुसी हुँदै माछा विमलाको प्लास्टिकको झोलामा हालिदियो । विमलाले एक सय रुपियाँ सोनामलाई दिँदै भनिन्- 'पढ्न पनि नछोडेस् है सोनाम, दुःख सुख भनेको त परिरहन्छ । तँ जस्तो साहसी बच्चालाई मैले के सम्झाउनु ?' भन्दै उनी बाटो लागिन् ।
छोरा अबेरसम्म घर नफर्किएको पीरले कनैया छट्पटाइरहेका थिए । सोनाम हँसिलो अनुहारमा नाङ्गै, सानो झोला बोकी भित्र पसेको देखेर कनैयाले छक्क पर्दै भने- 'हैन तँ यो के गति लिएर आएको हँ ? किन नाङ्गै छस् ?'
सोनामले कपडा फेर्दै एक-एक गरी सबै कुरा बतायो । उनले अलि रिसाएको स्वरमा भन्यो- 'तिमीले जाल हाल्न सिकाइदिएको भए मैले आज धेरै दुःख पाउँदिनथेँ ।'
कनैयाले लामो सास फेर्दै भने- 'म तेरो हातमा जाल होइन सधैं कलम देख्नचाहन्थेँ, छोरा !'
सोनामले बाबुलाई सम्झाउँदै भन्यो- 'पढ्न पनि पढिहाल्छु नि, पीर नै नगर तर दुःख पर्दा अर्कासँग पैसा माग्नभन्दा आफैँले मिहिनेत गरी पैसा कमाउनु राम्रो हो, बुझ्यौ ? छोराको कुरा सुनेर कनैयाले भने- 'हो बाबु, तैँले ठीक भनिस् । अब म तँलाई पानीमा जाल हाल्न मात्र होइन जाल बुन्न पनि सिकाउँछु ।'
जरुर उसका आँखा
यदि सपना साचो हुन्थ्यो भने